Vietnam: Arday samaysay qalab hawada sifeeya | Biyoguurenews.com
Home Wararka Vietnam: Arday samaysay qalab hawada sifeeya
Vietnam: Arday samaysay qalab hawada sifeeya
Koox arday ah oo u dhashay dalka Vietnam ayaa waxay ikhtiraaceen qalab hawada nadiifiya oo ay ku rakibeen baaskiilladooda, si ay uga raystaan xidhashada maaska (mask) laga xidho dikhowga hawada ee ay xidhaan marka ay iskuulka tegayaan.
Saddexda arday ee saaxiibka ah oo dhigta dugsiga sare ee Thang Long Gifted School oo ku yaal magaalada Da Lat ayaa tijaabo ku waday muddo lix bilood ah qalabkan ka hor intii aanay nashqadiisa kama dambaysta ah soo bandhigin.
Qalabkan oo lagu rakibayo shookaanta baaskiilka, ayaa waxa ku jira aalad hawada sifaysa iyo baytari. Waxaana uu leeyahay saddex lakab oo cudbi ah iyo maro kale oo kaarboon ka samaysan oo boodhka qabata.
Aaladda hawada sifaysa wada ku xidhan laba marawaxadood oo yaryar oo taayirka hore labada dhinac ka sudhan kuwaas oo xadhig ugu sii xidhan yahay daynabada baaskiilka.
Waxay hawada ku soo tuurayaan wajiga qofka baaskiilka fuushan, sidoo kalena waxay dabaynayaan baytariga dabka siinaya aaladda hawadu sii dhex marayso ee sifaynaysa ee ku rakiban shookaanta baaskiilka.
Tijaabadii qalabkaa lagu waday ayaa muujisay in qalabkaasi uu hawada ka saari karo boodhka ku jjira boqolkiiba 86 iyo sidoo kale boqolkiiba 63 neefta Nitrogen Oxide, sidaana waxa sheegay saraakiisha maxalliga ah.
Pham Gia Sam, oo ah macalin maadada Fiisigiska ka dhiga dugsigaa ayaa ku kalsoon in natiijada tijaabadaa ka soo baxday tahay mid la isku hallayn karo oo lagu gaadhay tijaabooyin badan oo goobo kala duwan oo magaalada ah lagu sameeyey.
Saddexda arday oo abaal marintii labaad ee sannad dugsiyeedkan ee dhinaca farsamada iyo sayniska ee heerka dugsiga sare ku guulaystay ayey ka go’antahay in ay sii wadaan shaqada ay ku sii horumarinayaan qalabkan ay ikhtiraaceen si si buuxda loogu manaafacaadsan karo.
“Mustaqbalka dhaw, waxaanu warshadayn doonaa qalabkan hawada sifaynaya oo lagu rakibi doono baaskiiladaha kooraanka ku shaqeeya, waxaanay taasi gacan ka gaysan doontaa ilaalinta caafimaadka dadka iyo deegaankaba” ayuu yidhi arday la yidhaa Cao Thi Khanh.
Si kharashka ku baxaya samaynta qalabkani aanu u noqon mid badan, ayaa ardaydu waxay adeegsadeen walxo dib loo farsamayn karo.
Arintani ma aha fikrad cusub, farsamo yaqaan Dutch ah oo la yidhaa Daan Roosegaarde ayaa muddo dhawr sano ah ku hawlanaa inuu sameeyo baaskiil dikhowga hawada dadka ka ilaaliya, waxaanu dedaalkiisaasi qayb ka yahay mashruuc weyn oo deegaanka [lagu daryeelayo oo socda].
Aaladda uu isaguna sameeyey oo qudheeda lagu rakibayo shookaanta baaskiilka, ayaa waxay soo nuugaysaa hawada wasakhaysan ka dibna waxay ku sifaynaysa farsamada la yidhaa Ionisation ka dibna waxa ay hawadii oo nadiif ah ku sii daynaysaa wajiga qofka baaskiilka wada. Farsamadiisaa waxa uu ka dheegay farsamo kale oo biyaha cuntada lagu kariyo lagu sifeeyo.
Roosegaarde shirkad uu leeyahay oo la yidhaado Studio Roosegaarde ayaa maaggan qorshe ay ku doonayso in ay baaskiillo hawada sifeeya ku soo saarto.
Waxaanay rajaynaysaa in hadii wershad aad u soo saarta baaskiilladaa ay hirgeliso in ay xal u noqon doonaan magaalooyin badan oo hawadoodu dikhowday oo muddo dheer xal u raadinayey arintaas.
Shirkaddu waxay BBC-da u sheegtay in taariikhda la hir gelin doono soo saarista baaskiilladaas ay ka wada tashanayaan shirkadda Ofo oo ah ta ugu weyn Shiinaha ee baaskiillada soo saarta.
Previous articleBBC Facebook oo kashifeysa sirteeda
Next articleSiyaasi Xukuumada Ku Eedeeyay In Ay Marin Habaabinayso Qorshihii Hanti Dhowrka Cid Gaara ah Lagu Bandhtimaameedsanayo.